Apho Ukufumana Yurophu Uninzi Magnificent Architecture | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > Apho Ukufumana Yurophu Uninzi Magnificent Architecture
Apho Ukufumana Yurophu Uninzi Magnificent Architecture
Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba eYurophu
Ukujonga ezinye zezona zakhiwo zibalaseleyo kwiholide yakho elandelayo? Ukuba kunjalo, akukho mhlawumbi akukho indawo engcono kunokuba Europe kuwe. Enoba ukuba babe nomdla izimbo bokwakha lwamandulo okanye enethemba ukufumana ezinye walenza-yaziwa nezinto, imizi yaseYurophu na enento. Makhe jonga kwi eminye imizekelo izakhiwo buvele phi ukubona konke:
Eli nqaku labhalelwa ukufundisa malunga nokuHamba koololiwe kwaye lenziwa ngu Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
Architecture Kakhulu: ElamaTaliyane
ElamaTaliyane izele izixeko needolophu encinane apho lahleka ukugcina izakhiwo ezihle. Enoba ku eRoma okanye Florence, phantse zonke ikona ulingana umfanekiso. Kuba abakhenkethi befuna kwiidolophu ezincinane gorgeous, IVicenza yeyona nto indawo eyiyo. close It ngokuthi xa sele ukuthatha uloliwe okanye ukusuka eVenice, ephinde ulingana tyelelo. Nangona noVincenza ke babedume yayo Renaissance style bokwakha engekakhawulwa ingqondo Andrea Palladio, izakhiwo yelo kudla yesiGothic, cacisa, kwaye esihle.
Phakathi kwezinye izixeko Italian awukwazi miss, NeRoma noFlorence lubalasele ezithandwayo. ERoma kungenxa egcwele kwemihlaba bonke abantu kufuneka ubone kanye ebomini babo. i Colosseum, st. UPetros Basilica, kela, yaye kumthombo waseTrevi Zonke zikulungele ukutyelelwa. Kwelinye icala, Florence unazo iindlela ezahlukeneyo, ngakumbi Greek yamandulo bokwakha yamaRoma, Gothic and Renaissance.
Architecture Kakhulu: Fransi
France ayikho ekhaya ukuya kwizixeko ezimbalwa afunisele ngokubanzi iintlobo eziya kushiya naliphi Magnificent Architecture lover kanzima. Phakathi abaviwa inkulumbuso ukuba kutyelelo, eStrasbourg, Bordeaux, yaye EParis ukuba banikele kakhulu.
Kukho ezininzi ukuze ubone kwaye ukwenza eStrasbourg, kuquka imizekelo ebonakalayo izakhiwo yesiGothic, edibene izithili mihla postmodern kunye bokwakha zilele. Bordeaux ukhetheke. Esi sixeko sikhulu kweli kummandla Aquitaine kukho ummandla zasezidolophini namnandi-ngenkulungwane ye-18, Palace of the Bourse, kunye Cathedral Saint Andre. Ekugcineni, IParis idume njengenye birthplaces izakhiwo yesiGothic, kodwa ke ityebileyo imizekelo ezahlukeneyo Belle Epoque kunye Art entsha.
Basel ku eStrasbourg Uqeqesha
Kukho ezininzi ubuncwane bokwakha ukuba kungafunyanwa Jemani . kunjalo, ezimbini abo onomtsalane kakhulu eBerlin no Rothenburg. Architecture abadli isandla ngesandla nge kwimbali, kwaye ungabona oku ngokucacileyo eBerlin. Isixeko wahlukene kanye, kwaye ibonakala ngokucacileyo kwezinye iindawo. Loo nto yenza kube indawo enkulu amava izinto ezahlukeneyo izakhiwo yehle nzulu kwi eyimbali impembelelo art.
Kwelinye icala, Rothenburg yindawo ngathi Kwathi ngqo ngaphandle intsomi. This sleepy, kwidolophu medieval-ekhangela is a abakhenkethi ozithandayo. Yinto ngumzekelo obalaseleyo ezintle izakhiwo aphakathi yaseYurophu kunye neendonga zawo dolophu kunye nophahla ezinophahla.
Stuttgart ku Rothenburg Uqeqesha
Nuremberg ku Rothenburg Uqeqesha
EYurophu Kubalulekile uhamba nge, kwaye kukho nezinye iindawo ezininzi ezintle ukuba kufuneka sizame ukuba ahambele. izakhiwo Zobungangamela inamandla ENgilani, Bheljiyam, Ostriya , Swiden, kwaye i elamaDatshi njengokuba.
Xa sele ukulungele ukuba ukubhukisha amatikiti uloliwe wakho ukuze zibukeke emehlweni-ukubona hambo lwe amaphupha akho, khangela phezulu yezindawo zakho Gcina i Train.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmagnificent-architecture%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Architecture	uhambofrance	travelgermany	ngokwehambo
Qeqesha ukuhamba iBritane, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo ePortugal, Uloliwe ohamba eScotland, Uloliwe eSpain, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu, Ukuhamba eIceland
Uhambo loLoliwe, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe eSpain, Ukuhamba eYurophu
Uhambo loLoliwe, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu